အမျိုးသမီးမျောက်များတွင်လူမှုလွှမ်းမိုးမှု dopamine receptor function နှင့်ကိုကင်းအားဖြည့်ခြင်း (2013) - Your Brain On Porn
dopamine အဲဒီ receptor function ကိုနှင့်ကိုကင်းအားဖြည့် (2013): အမျိုးသမီးမျောက်တွေကိုလူမှုကြီးစိုး
Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC စက်တင်ဘာ 1, 2013 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ စက်တင်ဘာ 1, 2012; 72 (5): 414-421 ။
အွန်လိုင်းဧပြီ 14, 2012 ထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2012.03.002
မိုက်ကယ်အေ Nader,1,2 ဆူအိပ်ချ် Nader,1 ရှင်ပေါလုဒဗလျူ Czoty,1 Natallia V. Riddick,1 အိပ်ချ် Donald Gage,2 ရောဘတ်ဒဗလျူသူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်,1 ဘရန်ဒီအယ်လ် Blaylock,1 ဂျေး R. Kaplan,3 Pradeep K. Garg,2 Huw ML ဒေးဗီးစ်,4 ဒံယလေသ Morton,4 Sudha Garg,2 နှင့် ဗက်အေ Reboussin5
အများဆုံးသုတေသနအထီးအသုံးပြုသွားမည်ထားပြီးသော်လည်းဦးနှောက်ပုံရိပ်နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ, ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုမှ dopamine အကြားတစ်ဦးပြောင်းပြန်ဆက်ဆံရေးမျိုး (DA) D2 / D3 receptors နှင့်အားနည်းချက်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဥပမာ, လူမှုရေးအုပ်စုကြီးစိုးဖြစ်လာကြောင်းအထီးမျောက် D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောမြင့်တက်ရှိသည်နှင့်ကင်းအားဖြည့်ဖို့လျော့နည်းအားနည်းချက်ရှိပါတယ်။
DA D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအမျိုးသမီး cynomolgus မျောက်တွေကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည် (ဎ = 16) သူတို့တစ်ဦးချင်းစီတည်ငြိမ်လူမှုရေးအပေါ်မှအောက်သို့ဆင်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းနှင့်နောက်တဖန်တစ်ဦးချင်းသျောသည့်အခါဖူး3လအကြာ, သျောစဉ်တွင် positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) ကိုသုံးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, PET လူမှုရေးအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းခြင်းအောက်ပါ DA Transporter (DAT) ရရှိနိုင်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုဆန်းစစ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ပုံရိပ်လေ့လာမှုများပြီးစီးလျက်ရှိကြ၏ပြီးနောက်မျောက်အားဖြည့်တစ်ဦး fixed-အချိုး 0.001 အချိန်ဇယားအောက်တွင် (0.1-30 / ကီလိုဂရမ် / ဆေးထိုး mg) indwelling သွေးကြောသွင်းပြွန်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းနှင့်အတူကိုထညျ့သှငျးခဲ့သညျ။ တုန့်ပြန်မှုနှုန်းဆားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အခါထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့ကြသည့်အခါကင်းအားဖြည့်များ၏သိမ်းယူမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
DAT မ caudate နျူကလိယနှင့် putamen အတွက် D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကိုမလူမှုရေးရာထူး၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ခဲ့ပေမယ့်နှစ်ဦးစလုံးသိသိသာသာလူမှုရေးအပေါ်မှအောက်သို့ဆင်း၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုအောက်ပါပြောင်းလဲသွားတယ်။ DAT ရရှိနိုင်မှုလက်အောက်ခံအမျိုးသမီးအတွက်ယုတ်လျော့နေချိန်မှာ D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုသိသိသာသာ, လွှမ်းမိုးဖြစ်လာခဲ့သည်ကြောင့်အမျိုးသမီးများတွင်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ လွှမ်းမိုးအမျိုးသမီးမျောက်လက်အောက်မျောက်ထက်သိသိသာသာနိမ့်ဆေးများမှာကိုကင်းအားဖြည့်ရရှိခဲ့သည်။
ဤအတွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီး, ကိုကင်းအားဖြည့်ဖို့ D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်အားနည်းချက်များအကြားဆက်ဆံရေးအမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများအတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်ပုံပေါ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုလူမှုပတ်ဝန်းကျင်အလှနျအဆိုပါ DA system ကိုသာသက်ရောက်ပေမယ့်ယောက်ျားထက်အမျိုးသမီးများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်များရှိသည်သောနည်းလမ်းများထဲမှာဒါမကဖော်ပြသည်။
keywords: Dopamine, အားနည်းချက်, PET ပုံရိပ်, လူမှုရေးရာထူး, အမျိုးသမီး, လိင်ကွဲပြားမှု
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှု (ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကအဓိကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ဆက်လက်1), လက်ရှိကင်းအသုံးပြုမှုကိုအတည်ပြုခန့်မှန်းခြေ 1.6 သန်းအမေရိကန်များနှင့်အတူ (2) ။ ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းနိုင်ငံအားလုံး၏ 56% တိုးမှတ်တမ်းတင်ကင်းခေတ်ရေစီးကြောင်းပေါ်သတင်းပို့ (1) ။ အတော်ကြာဝတ္ထုနည်းလမ်းစဉ်းစားလျက်ရှိသော်လည်း, ပစ္စုပ္ပန်မှာကိုကင်းစွဲအဘို့အဘယ်သူမျှမ FDA က-အတည်ပြုကုသမှုရှိပါတယ် (3-4) ။ ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုမှအားနည်းချက်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု၏သက်သေအထောက်အထားများ (ရှိပါသည်5), အမျိုးသမီးများ, အစောပိုင်းကအသက်အရွယ်မှာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုစတင်ပိုမိုမြန်ဆန်မှီခိုဖို့တိုးတက်နှင့်အလွဲသုံးစားမှု, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးအကျိုးဆက်များဖို့ပိုအားနည်းချက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ (6-7) ။ သို့သော်အမျိုးသမီးဘာသာရပ်များနှစ်ဦးစလုံး preclinical နှင့်လက်တွေ့သုတေသနအတွက် underrepresented နေကြသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏ etiology ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးပမ်းတစ်မူထူးခြားတဲ့လူမှုရေးအပြုအမူထည့်သွင်းကြောင်းတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ် positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) သုံးပြီးဦးနှောက်ပုံရိပ်နှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်အမျိုးသမီး cynomolgus မျောက်ကိုအသုံးပြု ဝတ္ထုကုသမှုချဉ်းကပ်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတစ်ခုအပိုဆောင်းရည်မှန်းချက်အမျိုးသမီးမျောက်မှလူမှုရေးအရသျောအထီးဘာသာရပ်များအတွက်အစောပိုင်းကအလုပ်တိုးချဲ့ဖို့ပဲ။
ဦးနှောက် dopamine (DA) (ကိုကင်းများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှု mediates8) ။ အထီးဘာသာရပ်များ (လူသားမျောက်နှင့်ကြွက်) ကို အသုံးပြု. သုတေသန DA D2 / D3 receptors နှင့် psychostimulant အားဖြည့်အကြားဆက်ဆံရေးအကြံပြု, အောက်ပိုင်းအစီအမံနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ သာ. ကြီးမြတ်အားဖြည့်ကြုံတွေ့ထိုကဲ့သို့သော (8-11) ။ သူတို့တစ်ဦးချင်းစီလူမှုရေးအိမ်ယာ (၏2လအကြာနောက်တဖန်သျောနှင့်စဉ်တွင်ဥပမာအားဖြင့်, D3 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအထီးမျောက်တွေကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်9) ။ ကနဦး D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနောက်ဆုံးလူမှုရေးရာထူး၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်, ကသိသိသာသာလူမှုအုပ်စုကြီးစိုးဖြစ်လာခဲ့သည်ကြောင့်မျောက်တွေကိုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ အမျိုးသားများတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီ, D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအတွက်တိုးမြှင့်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပိုင်းနှုန်းထားများနှင့်ဆက်စပ်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, အမျိုးသမီးအတွက်ထိုကဲ့သို့သောဆက်ဆံရေးနည်းနည်းသက်သေအထောက်အထားများ, ပစ္စုပ္ပန်မှာရှိပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုသုံးခုမူလတန်းရည်ရွယ်ချက်များမှခဲ့ကြသည်: 1) ကြီးစိုးအမျိုးသမီး, သူတို့ရဲ့အထီး counterparts တွေကိုကဲ့သို့ပိုမိုမြင့်မား D2 / D3 receptors နှင့်ကိုကင်းမိမိကိုယ်မိမိအုပ်ချုပ်ရေးလျှော့ချနှုန်းထားများခဲ့ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်; 2) ကြီးစိုးအပေါ်မှအောက်သို့ဆင်း၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုအောက်ပါ DA Transporter (DAT) ရရှိနိုင်မှုကိုအကဲဖြတ်; နှင့် 3) တစ်ဦးချင်းအိုးအိမ်အခြေအနေများလူမှုရေးမှအမြိုးသမီးပြန်လာပြီးနောက် D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုအကဲဖြတ်ရန်။
တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များများတွင်အိမ်ရာအခြေအနေများ, လူမှုရာထူး, တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များအလှနျ (ကိုကင်းများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုလွှမ်းမိုးနိုင်သည်9,11-15) ။ ကျနော်တို့ (သူတို့အနေနဲ့သန့်စင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြီးစိုးအထီးမျောက်ကိုကင်းအားဖြည့်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးကြသည်တွေးဆ2,16) ။ အမျိုးသမီးမျောက်များပါဝင်သောလိင်တူချင်းလူမှုရေးအုပ်စုများလည်း (linear အပေါ်မှအောက်သို့ဆင်းဖွဲ့စည်းသွားရမည်အကြောင်း17,18), လွှမ်းမိုးအမျိုးသမီး (အထီးအကြားလေ့လာတွေ့ရှိနေသည်ထက် သာ. ကြီးမြတ်ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏လက်အောက်ခံ cagemates ဆီသို့ဦးတည်ရန်လိုဟန်19,20) ။ ထို့ကြောင့်ကအမျိုးသမီးမျောက်အကြားတစ်ဦးကြီးစိုးလူမှုရေးအနေအထား၏ဆည်းအလားတူလူမှုရေးအုပ်စုလက်အောက်ခံဖြစ်လာကြောင်းအမျိုးသမီးမျောက်နှိုင်းယှဉ်ကင်းအားဖြည့်အတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်ခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲလျှောက်လျော့နည်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ပေးဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။ (အီစထိုဂျင် DA အဆင့်ဆင့်ကိုထိခိုကျနိုငျသောကွောငျ့21,22) နှင့်ရာသီစက်ဝန်းအဆင့် D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုလွှမ်းမိုးနိုင်သည် (23), အားလုံးပေပုံရိပ် D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကျနော်တို့တိုးဘို့ခွင့်ပြုပါသို့မဟုတ်ကြောင့်လူမှုရေးရာထူးဖွဲ့စည်းခြင်းမှလျော့နည်းစေလိမ့်မည်ဟုတွေးဆသော luteal အဆင့်မှယုံကြည်စိတ်ချရသောနိမ့်ဆွေမျိုးဖြစ်သည့်အတွက် follicular အဆင့်ကောက်ယူခဲ့သည်။
အဆိုပါဘာသာရပ်များ (16 စမ်းသပ်မှုတွေအရင်တော့မှားမယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီး cynomolgus မျောက်ခဲ့ကြသည်Macaca fascicularis), 8-18 နှစ်ရှိပြီ, အင်ဒိုနီးရှား (အင်စတီကျု Pertanian Bogor, Bogor, အင်ဒိုနီးရှား) မှတင်သွင်းခဲ့သည်။ quadrant သို့မျောက်ကွဲကွာကြောင်းဖြုတ်ဝါယာကြိုးကွက် partitions ကို (0.71 × 1.73 × 1.83 မီတာ) နှင့်အတူ; မျောက်သံမဏိလှောင်အိမ်တှငျနထေိုငျ (Allentown လှောင်အိမ်ပစ္စည်းကိရိယာ, Co. , Allentown, NJ 0.71 × 0.84 × 0.84 မီတာ) ။ လူမှုရေးအိုးအိမ်စဉ်အတွင်းမျောက်ကွဲကွာခဲ့ကြနှင့်တစ်ဦးချင်းစီတိုက်ကျွေးဘို့နေ့ရက်တိုင်း 1-2 နာရီများအတွက်သျော။ တစ်ခုမှာမျောက် 15 မှဘာသာရပ်များ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကယူလာကြိုတင်အော်ပရေတာသင်တန်းပေးခြင်းသဘာဝအကြောင်းတရားများ၏အနိစ္စရောက်လေ၏။ တစ်ခုချင်းစီကိုမျောက်အဖြစ်လူမီနီယံကော်လာ (မျောက်ထုတ်ကုန်များ, ရက်ဒ်ဝုစီးတီး,, CA) နဲ့တပ်ဆင်နှင့်တစ်ဦးစံမျောက်ကုလားထိုင် (မျောက်ထုတ်ကုန်များ) တွင်အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာထိုင်ဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည်။ မျောက်အပတ်စဉ်အလေးချိန်မှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အခမဲ့-နို့တိုက်ကျွေးရေးအဆင့်ဆင့်၏ 95% ခန္ဓာကိုယ်အလေးဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့နေ့စဉ်အလုံအလောက်အစားအစာ (Purina မျောက် Chow နှင့်လတ်ဆတ်သောအသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်) တိုက်ကျွေးခဲ့သည်။ ရေမရရှိနိုင်ခဲ့ ကြော်ငြာ libitum အဆိုပါ homecage ၌တည်၏။ ရာသီစက်ဝန်းအဆင့် (နေ့စဉ်အင်္ဂါဇာတ် swab အားဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်18,23) နှင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 28 ရက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သွေးထွက်သည့်နေ့၏ပထမနေ့သည်မီးခိုးများကိုပြခြင်းနှင့်သံသရာ၏ပထမ ၁ အဖြစ်မှတ်ယူသည်။ နေ့ရက် ၂-၁၀ ရက်သည် follicular အဆင့်နှင့်ရက်ပေါင်း ၁၉ မှ ၂၈ အတွင်းရာသီလာခြင်းသံသရာ၏ luteal အဆင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သည်။ PET ပုံရိပ်လေ့လာမှုများကိုသာ follicular အဆင့်တွင်ကောက်ယူခဲ့ကြစဉ်အပြုအမူလေ့လာမှုများရာသီဥတုသံသရာအဆင့်နှစ်ခုလုံးအတွက်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်; ၎င်းကိုပလာစမာ progesterone ပါဝင်မှုကိုတိုင်းတာခြင်းဖြင့်အတည်ပြုခဲ့သည် (Biomarkers Core Laboratory, Yerkes National Primate Research Center, Atlanta, GA) ။ ပရိုဂျက်စတုန်းအဆင့်များ <1 ng / ml သည် follicular အဆင့်ကိုညွှန်ပြသည်။ တိရိစ္ဆာန်အိမ်ယာ၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားလုံးကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်အမျိုးသားသုတေသနကောင်စီနှင့်အညီလုပ်ဆောင်ခဲ့သည် အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသုတေသနအတွက်နို့တိုက်သတ္တဝါများ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များ မနိုးသစ်တောတက္ကသိုလ်၏တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ယင်းဝိတ်သစ်တောတက္ကသိုလ်က Non-လူ့မျောက်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသန့်စင်စီမံကိန်းများတွင်ဖော်ပြထားအဖြစ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်ပေးခဲ့ပါသည်။
လူမှုရေးအဆင့်အတန်း agonistic တွေ့ဆုံ (များ၏ရလဒ်ကိုသုံးပြီးဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်17) ။ ရက်သတ္တပတ်လူမှုရေးအိမ်ယာ၏ 2-12 မှစ. နှစ်ခုလေ့လာသူများသီးခြားစီကလောင်နှုန်း 3-34 လေ့လာရေးအစည်းအဝေးများ (စုစုပေါင်းအဘို့, ကလောင်နှုန်း 36 လေ့လာတွေ့ရှိချက် / ရက်သတ္တပတ်ကောက်ယူ18) ။ တိုက်ပွဲတွေလည်း၏ဆုရရှိသူအရှုံးသမားမှကြီးစိုးစဉ်းစားကြသည် ဟူ. ၎င်း, linear နှင့် Transit အပေါ်မှအောက်သို့ဆင်းချင်းစီကလောင်ထဲမှာရှိခဲ့သညျ။ ရှစ်မျောက် (#1 သို့မဟုတ် #2 အဆင့်) ကြီးစိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်7လက်အောက်ခံခဲ့ကြသည်ယောက်ျားအတွက်ယခင်ကပြုလေ၏အဖြစ် (, (#3 သို့မဟုတ် #4 အဆင့်) ခဲ့ကြ9) ။ ခန္ဓာကိုယ်အလေး, အသက်နှင့်လူမှုရေးအဆင့် (မပတျသကျဘူး18).
Cerebrospinal အရည် (CSF) ပြင်းအား
တိရစ္ဆာန် 12 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်နှင့်အတူ anesthetized ခဲ့ကြသည်နေစဉ် DA metabolite homovanillic အက်ဆစ် (HVA) ၏ပြင်းအားအကဲဖြတ်ရန်, CSF တစ်ခုတည်းရာသီစက်ဝန်း၏ luteal အဆင့်စဉ်အတွင်းတစ်ချိန်က follicular အဆင့်စဉ်နှင့်တစ်ကြိမ်, 10 မျောက်ကနေသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာထိုးဖေါက်ခြင်းအားဖြင့်ကောက်ယူခဲ့သည် (IM) ketamine (18) ။ လေးမျောက်ဤအချိန်တွင်မှန်မှန်စက်ဘီးမခံခဲ့ရ, ဒါကြောင့်နှစ်ဦးကိုနမူနာဆိတ်ကွယ်ရာ2ရက်သတ္တပတ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ က HVA ပြင်းအား (ရာသီစက်ဝန်းအဆင့်တလွှားကွာခြားမနောက်ပိုင်းတွင်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့သည်လိုက်တဲ့အခါစားပွဲတင် S1), နှစ်ခုနမူနာအနေဖြင့်ဒေတာများစက်ဘီးမဟုတ်သောလူပေါင်းကားများအပါအဝင်အသီးအသီးမျောက်များအတွက်ပျမ်းမျှခဲ့ကြသည်နှင့်တစ်ဦးချင်းသျော CSF HVA baseline စဉ်းစားခဲ့ကြ (ဎ = 16) ။ လူမှုရေးအိုးအိမ်ပြီးနောက် CSF အဆိုပါ follicular အဆင့်စဉ်အတွင်းအားလုံးမျောက်ကနေစုဆောင်းခဲ့သည်။ HVA သတင်းပို့စာရင်းအင်းရည်ရွယ်ချက်များ, အကျူး vs. များအတွက် Post-လူမှုရေးအိုးအိမ်အားလုံး pairwise မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ် post ကို hoc ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (Tukey စမ်းသပ်မှု) နဲ့တစ်ဦး 2-လမ်းထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ ANOVA အသုံးပြုသွားမည်။
တစ်ဦးကဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်တစ် 15-တက်စလာ GE Signa ရော်ဘာစကင်နာ (GE ကဆေးဘက်ဆိုင်ရာစနစ်များ) နဲ့ (MRI) လေ့လာမှု ketamine အောက်မှာတစ်ဦးချင်းစီမျောက်အတွက်ကောက်ယူခဲ့သည် (20-1.5 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, im) မေ့ဆေး။ , T1 မာန်တင်းတပြင်လုံးကိုဦးနှောက်ပုံရိပ်များ, လက်ျာနှင့်လက်ဝဲ caudate နျူကလိယ (Cd), putamen (Pt), နှစ်ဦးစလုံး 0.5 စင်တီမီတာအချင်းများနှင့် cerebellum မှာ (0.8 စင်တီမီတာအချင်း Cb) အပါအဝင်ခန္ဓာဗေဒအကျိုးစီးပွား (ROIs) ၏အလင်းဆုံဒေသများသတ်မှတ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည် ပေပုံရိပ်တွေနှင့်အတူနောက်ပိုင်းတွင် co-မှတ်ပုံတင်ဘို့။ ပေလေ့လာမှုများ [သည့် DAT radioligand ကိုအသုံးပြု18F ကို] fluorobenzylchlorotropane (FCT) (24) နှင့် D2 / D3 အဲဒီ receptor radioligand [18F ကို] fluoroclebopride (FCP), အ D2 ကဲ့သို့ superfamily (ဆိုလိုသည်မှာ, D ကို၏ Subtype အကြားခွဲခြားမ2, D ကို3 နဲ့ D4 receptors) (25) ။ တစ်ဦးချင်းသျောနှင့်လူမှုရေးအိမ်ယာ၏3လအကြာစဉ်တစ်ခုချင်းစီကိုမျောက်နှစ်ဦးစလုံး tracers နှင့်အတူ scan ဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ # 1- နှင့် # 4-အဆင့်မျောက်တစ်ဦးချင်းအိုးအိမ်မှပြန်လာပြီးနောက်တတိယအကြိမ် scan ဖတ်ခဲ့ကြသည်။ ထက်ဝက်မျောက်အဘို့, D2 / D3 ပေလေ့လာမှုများ DAT မတိုင်မီကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ (ကြည့်ရှုခန္ဓာကိုယ်အပူချိန် 40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီးအရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာဟာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်လျှောက်လုံးစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြ 23) ။ PET Scan ဖတ်အထူးသခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်4မီလီမီတာ resolution နဲ့, အသေးစား-တိရိစ္ဆာန်ပုံရိပ်ဘို့ဒီဇိုင်းထုတ် Siemens / CTI Concorde မျောက် microPET P2 ကင်နာကိုသုံးပြီးဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစကင်ရဲ့ start ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်5MCI [at18F ကို] FCP သို့မဟုတ် [18F ကို] FCT heparinized ဆား၏3ml အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, ထိုးသွင်းခံခဲ့ရသည်။ တစ်ရှူးအချိန်-လှုပ်ရှားမှုခါးဆစ်တို့ Cd နှင့် Pt အဘို့အသီးအသီးရွယ်နှင့်ဖြန့်ဖြူးအသံအတိုးအကျယ်အချိုး (DVR) တွင် radiotracer ပြင်းအားများအတွက်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ခဲ့ကြသည်ရည်ညွှန်းဒေသအဖြစ် Cb အသုံးပြု. တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။
ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့တစ်ဦးချင်းစီမျောက် (မြုံခွဲစိတ်အခြေအနေများအောက်တွင်နာတာရှည် indwelling သွေးပြန်ကြောပြွန်နှင့်အရေပြားအောက်ဆုံးသွေးကြောဆိပ်ကမ်းကို (Access ကို Technologies က, Skokie, IL) နဲ့ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်26) ။ တစ်ခုချင်းစီကိုမူးယစ် Self-အုပ်ချုပ်ရေး session တစ်ခုမတိုင်မီကတိရစ္ဆာန်၏နောက်ကျော chlorhexidine acetate ဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့သန့်စင်ခဲ့ 95% EtOH နှင့်ဆိပ်ကမ်းတခု 22-gauge Huber ပွိုင့်အပ် (Access ကို Technologies က) ကနေတဆင့်အခနျးပြင်ပတွင်တည်ရှိသောပြုတ်ရည်စုပ်စက်မှချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
တစ်မျောက်ကုလားထိုင်လိုက်လျောညီထွေဖို့ဒီဇိုင်း; အဆိုပါယန္တရားတစ်ခုလေဝင်လေထွက်, အသံ-attenuating အခန်းထဲက (Med Associates မှအရှေ့ဖဲရ်ဖီးလ် VT 1.5 × 0.74 × 0.76 မီတာ) ပါဝင်သည်။ နှစ်ဦးကတုန့်ပြန်သော့ (5 စင်တီမီတာကျယ်ပြန့်) တစ်ဦးချင်းစီတုံ့ပြန်မှုသော့နှင့်တစ်ဦးအစာအာဟာရ receptacle အထက်တွင်စင်တီမီတာတုံ့ပြန်မှုသော့အကြားတည်ရှိခဲ့သည် 14 သုံးလှုံ့ဆော်မှုအလင်းအိမ်တစ်အလျားလိုက်အတန်းနှင့်အတူအခနျးတစျခုအခြမ်းတွင်တည်ရှိသောခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုမျောက်အားဖြည့်တဲ့ 30-တုံ့ပြန်မှု fixed-အချိုး (FR 30) အချိန်ဇယားကိုအောက်, လက်ဝဲသို့မဟုတ်လက်ယာသော့ချက်အပေါ်တုံ့ပြန်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေများအောက်တွင်အစားအစာတောင့်ဟာ 30 ပြီးနောက်ကယ်နှုတ်ခဲ့သည်th တစ်ဦး 10-s ကိုအချိန်ကုန်နေဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်တုံ့ပြန်မှု။ အစည်းအဝေးများ 15 စစ်ကူသို့မဟုတ်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကိုမဆို 60 မိပြီးနောက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ တုံ့ပြန်မှု key ကိုအထက်အလင်းအစားအစာရရှိမှုအချက်ပြ; တစ်ဦးတည်းသာအဓိကသော့ချက်တစ်ခု session တစ်ခုအတွင်းမှာတက်ကြွခဲ့သည်။
ပြွန် implantation ပြီးနောက်, အစားအစာ-ထိန်းသိမ်းထားတုံ့ပြန် re-တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်နှင့်ဆားကိုအနည်းဆုံး5ဆက်တိုက်အစည်းအဝေးများစားစရာဘို့လုံးလေးများများအတွက်အစားထိုးခဲ့ပါတယ်နှင့်တုံ့ပြန် (ဆိုလိုသည်မှာ, တုန့်ပြန်မှုနှုန်းအစားအစာ-အားဖြည့် 80 များအတွက်တုံ့ပြန်အနည်းဆုံး 3% အထိလျော့ကျဆိုလိုငွိမျးယူဆခဲ့သည်သည်အထိ တုံ့ပြန်မခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အတူဆက်တိုက်အစည်းအဝေးများ) ။ ကိုကင်း HCl ၏ re-ထူထောင်အစားအစာ-ထိန်းသိမ်းထားတုံ့ပြန်ကွဲပြားခြားနားသောဆေးများပြီးနောက် (မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု, မြုံ 0.9% ဆားအတွက်ဖျက်သိမ်း Bethesda, MD) တွင်တိုးမြှင့် 0.001 mg / kg / ဆေးထိုးရာမှအမိန့်ကျကွှအတွက်အစားအစာလုံးလေးများများအတွက်အစားထိုးခဲ့သည် 0.1 mg / kg / ဆေးထိုးဖို့တစ်ဝက်မှတ်တမ်းယူနစ်; တစ်ခုချင်းစီကိုထိုးမှာအနည်းဆုံး5အစည်းအဝေးများနှင့်တုံ့ပြန်တည်ငြိမ် (တုန့်ပြန်မှုနှုန်း 20 ဆက်တိုက်အစည်းအဝေးများအဘို့အဘယ်သူမျှမခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အတူ± 3% ကိုဆိုလိုတာ) ယူဆခဲ့သည်သည်အထိမရရှိနိုင်ခဲ့။ အစည်းအဝေးများ 30 ထိုးသို့မဟုတ်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကိုမဆို 60 မိပြီးနောက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုထိုးမှာအနည်းဆုံး2ဆက်တိုက်အစည်းအဝေးများများအတွက် follicular အဆင့်၏ရရှိနိုင်ရက်ပေါင်း (အစောပိုင်းနှစ်လယ်ပိုင်းမှ) 10-5 ဖြစ်ခဲ့သည်။ အစားအစာထိန်းသိမ်းထားတုံ့ပြန်အစောပိုင်း luteal အဆင့် (ပုံမှန်အားဖြင့်ရက်ပေါင်း 11-18) မှကွယ်လွန်သူ follicular စဉ်အတွင်းပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်ခံခဲ့ရသည်။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးယခင် follicular အဆင့်ကာလအတွင်းဝယ်ယူမခံခဲ့ရပါလျှင်, ကင်း၏တူညီသောထိုးနှောင်းပိုင်းတွင်-luteal အဆင့် (ရက် 19-26) ဖို့ mid- ကာလအတွင်းမရရှိနိုင်ခဲ့။ ဝယ်ယူဖြစ်ပွားခဲ့သည်သည်အထိအသစ်ဆေးများအမြဲ follicular အဆင့်မှာစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောကိုကင်းဆေးများအကြားကအနည်းဆုံး3အစည်းအဝေးများစားစရာဘို့-ထိန်းသိမ်းထားတုံ့ပြန်ရန်ပြန်လာ, ရှိခဲ့သည်။ တုန့်ပြန်မှုနှုန်းဆားဆေးထိုးရန်ဦးဆောင်တုံ့ပြန်ထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသောမှာနိမ့်ဆုံးကိုကင်းထိုးဝယ်ယူထိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ တစ်ဦးကကိုကင်းထိုးစစ်ဆင်ရေးဆားရရှိနိုင်ခဲ့သည့်အခါတုန့်ပြန်မှုနှုန်းကိုဆိုလိုတာမှပေးထားသောကင်းထိုးဘို့တုံ့ပြန်မှုနှုန်းထားများဆိုလို3ရက်ကြာနှိုင်းယှဉ် Two-tailed t-စမ်းသပ်မှု အသုံးပြု. အားဖြည့်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။
ကြီးစိုးနှင့်လက်အောက်ငယ်သားမျောက်များအကြားဝယ်ယူမှုနှုန်းကွာခြားမှုရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန် Kaplan-Meier ရှင်သန်မှုခါးဆစ်၏ log-rank analysis ကိုတွက်ချက်သည်။ တစ်ခုလုံးကိုကိုကင်းထိုး - တုံ့ပြန်မှုကွေးအကဲဖြတ်ရန်, အဓိကမှီခို variable တွေကိုတုံ့ပြန်မှုနှုန်း (session ကိုအရှည်အားဖြင့်ခွဲဝေစုစုပေါင်းတုံ့ပြန်မှု) နှင့်ကိုကင်းစားသုံးမှု (session တစ်ခုနှုန်းမီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်အတွက်စုစုပေါင်းစားသုံးမှု) ဖြစ်ကြသည်။ အစားအစာထိန်းသိမ်းမှုတုန့်ပြန်မှုနှုန်းနှင့်အားဖြည့်ဆေးများ (အချက်အလက်) ကိုသီးခြားနှစ်ချောင်း၊ ကြီးထွားလာသောနှင့်လက်အောက်ငယ်သားအဆင့်တွင်အတွင်းနှစ် ဦး ပါ ၀ င်သောတွဲဖက်ထားသော t-tests သည်စမ်းသပ်မှုတိုင်းတွင်ရာသီလာခြင်းအဆင့်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်တုန့်ပြန်မှုနှုန်းနှင့်စားသုံးမှုအစီအမံများကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ရာသီလာခြင်းသံသရာအဆင့်၏သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုများမရှိသောကြောင့်တုန့်ပြန်မှုနှုန်းနှင့်စားသုံးမှုအတွက်ကိုကင်းဓာတ်တစ်မျိုးစီတွင်အဆင့်နှစ်ခုလုံးမှပျမ်းမျှအားထပ်မံ (၂) လမ်းပါသောကှဲလှဲ (ANOVA) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုသုံးပြီးဆန်းစစ်လေ့လာခဲ့ပြီး၊ မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (Tukey စမ်းသပ်မှု) ။ 2-way ANOVA ကိုလုပ်ဆောင်ရန်စားသုံးမှုအတွက်ကုန်ကြမ်းဒေတာကို (log2) ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ မတူညီသောကှဲလှဲမှုမြားနှငျ့ Post-hoc မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (Tukey test) ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အားလုံးကိစ္စများတွင်, ကွဲပြားခြားနားမှု p <10 မှာကစာရင်းအင်းသိသိသာသာစဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
လူမှုရေးအရသျောအမျိုးသမီး၏အမူအကျင့်များနှင့် neurochemical profile များကို
တိရစ္ဆာန်များတစ်ဦးချင်းစီ (အမျိုးမျိုးသောခြွင်းချက်မရှိအပြုအမူတွေနဲ့ neurotransmitter metabolite အဆင့်ဆင့်လူမှုရေးရာထူး၏အလားအလာခန့်မှန်းအဖြစ်နောက်ပိုင်းမှာအသုံးပြုမှုအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့ပြီးသောကာလအတွင်း 27 လကြာသျောခဲ့ကြသည်18) ။ အားလုံးတစ်ဦးချင်းသျောအခြေခံအစီအမံလေးလည်းပြီးနောက်မျောက်ကျပန်းကလောင်နှုန်း4မျောက်များ၏လူမှုရေးအုပ်စုများမှတာဝန်ကျတယ်။ သိသိသာသာလူမှုရာထူး (F ကို1,31 = 5.94, P ကို ​​<0.05) HVA ၏ CSF အစီအမံကိုထိခိုက်။ တစ် ဦး ချင်းစီနေရာယူထားသည့်အခါအနာဂတ်လက်အောက်ခံမျောက်များသည်အနာဂတ်တွင်သိသာထင်ရှားသည့်အနာဂတ်မျောက်မျောက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိခဲ့သည် (t)14 = 2.06, P ကို ​​= 0.052) ။ HVA ပြင်းအားအတွက်ခြားနားချက် (t ကိုသိသာခဲ့သည်14 ဤအလူမှုရေးရာထူးမှီတစ်ချိန်က = 2.29, P <0.05) (သင်္ဘောသဖန်း။ 1A) ။ ကိုယ့်ကိုအများဆုံးကြီးစိုး (# 1-အဆင့်) နှင့်အများဆုံးလက်အောက်ခံ (# 4-အဆင့်) ဆန်းစစ်မျောက် (သင်္ဘောသဖန်း။ 1B) ကလက်အောက်ခံမျောက် (t အတွက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မား HVA ပြင်းအားကိုအတည်ပြု6 = 2.48, P ကို ​​<0.05) ။
A။ နောက်ဆုံးလူမှုရေးရာထူးတစ်ခု function ကိုအဖြစ်အမျိုးသမီး cynomolgus မျောက်တွေကို CSF HVA ပြင်းအားတစ်ဦးချင်းသျောနှင့်တည်ငြိမ်လူမှုရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းအောက်ပါနေစဉ်။ ဤအ data တွေကိုအဘို့, #1 နှင့် #2 #3 နှင့်နေချိန်မှာမျောက် (ပွင့်လင်းဘား) ကြီးစိုးစဉ်းစားနေကြသည်အဆင့် ...
လူမှုရာထူးနှင့် dopamine အဲဒီ receptor function ကို
PET Scan ဖတ်လူမှုရေးအိမ်ယာ၏3လအတွင်းအောက်ပါကြိုတင်ရန်နှင့်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံး [for18F ကို] FCT နှင့် [18F ကို] FCP သည် Cd နှင့် Pt နှင့် Cb အတွက်အနိမ့်အဆင့်ဆင့်အတွက်လွှာမှ၏မြင့်မားသောအဆင့်ရှိ၏။ အဆိုပါ Cd နှင့် Pt အတွက် DAT ရရှိနိုင်မှု differential အဆင့်နှင့်အိမ် (F ကိုအကြားသိသိသာသာအပြန်အလှန်အတူလူမှုရေးအိမ်ယာကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့သည်1,31 = 4.67, P ကို ​​<0.05; F1,31 = 4.97, P ကို ​​<0.05, အသီးသီး) ။ Post-hoc စမ်းသပ်မှုများအရမျောက်များကိုတစ် ဦး ချင်းစီထားရှိသည့်အခါ၊18F ကို] FCT (စားပွဲတင် 1) ကို Cd (t အတွက်14 = 0.54, P ကို ​​= 0.60) နှင့် Pt (t14 = 1.62, P ကို ​​= 0.12) နောက်ဆုံးလူမှုရေးရာထူးခန့်မှန်းခဲ့ပါဘူး။ လူမှုရေးအိုးအိမ်ပြီးနောက်လက်အောက်ခံမျောက် [အတွက်သိသာထင်ရှားသောလျှောက်လျော့နည်းခဲ့18F ကို] က Cd (t အတွက် FCT DVRs7 = 2.79, P ကို ​​<0.05) နှင့် Pt (t ကို။ )7 = 2.52, P ကို ​​<0.05); DAT DVRs သည်လွှမ်းမိုးလာသည့်မျောက်များတွင်မပြောင်းလဲခဲ့ပါ (စားပွဲတင် 1, သဖန်းသီး။ 2) ။ တစ် ဦး ချင်းစီနေရာယူသောအခါအသက်နှင့် DAT DVR အကြားသိသာသောဆက်စပ်မှုရှိသည် (P = -0.60, P <0.05); ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုလူမှုရေးအိုးအိမ်ပြီးနောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
[18F ကို] FCT (ထိပ် panel က) နှင့် [18F ကို] FCP (အောက်ခြေ panel က) ဖြန့်ဖြူးအသံအတိုးအကျယ်အချိုး (DVRs) ကို caudate နျူကလိယ (left ပြား) တွင်လူမှုရေးရာထူးတစ်ခု function ကိုအဖြစ်ပြောင်းလဲမှုနှင့် putamen (ညာပြား) ။ Panel များကြီးစိုးများအတွက်ယုတ် DVR တန်ဖိုးများကိုပြသ (#1 နှင့် #2 အဆင့်) နှင့် ...
အမျိုးသမီးမျောက်များအတွက် Dopamine Transporter ရရှိနိုင်
အိမ်ရာအခြေအနေများလည်း Cd (F ကိုအတွက် D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုထိခိုက်1,31 = 5.87, P ကို ​​<0.05), ဒါပေမယ့် Pt [F ကိုမ1,31 = 4.11, P ကို ​​= 0.06) (စားပွဲတင် 2) ။ post-hoc စမ်းသပ်မှု, မျောက်တစ်ဦးချင်းသျောခဲ့ကြသည်အခါ [များအတွက် DVRs ညွှန်ပြ18F ကို] FCP (စားပွဲတင် 2) ကို Cd အတွက်နောက်ဆုံးလူမှုရေးရာထူး (t ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့ပါဘူး14= 0.83, P ကို ​​= 0.42), ဒါပေမယ့် DVRs သိသိသာသာလွှမ်းမိုးဖြစ်လာခဲ့သည်ကြောင့်မျောက်တွေကိုတိုးပွားလာကြောင်း (t7 = 2.54, P ကို ​​<0.05) ။ လူမှုရေးအုပ်စုများအကြားနှိုင်းယှဉ်ခြင်း,18အဆိုပါ Cd အတွက်က F] FCP DVRs လက်အောက်ခံမျောက် (t ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြီးစိုးအတွက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့ကြ7 = 2.32, P <0.05; စားပွဲတင်2နှင့် သင်္ဘောသဖန်းသီး။2နှင့် and3) .3) ။ အားလုံးမျောက်3လကြာတဦးချင်းအိုးအိမ်မှပြန်လာသောခဲ့ကြသည်နှင့်အ D2 / D3 အဲဒီ receptor function ကို၏ plasticity အများဆုံးကြီးစိုးနှင့်အများဆုံးလက်အောက်ခံမျောက်တွေကိုထပ် Scan ဖတ်ခြင်းဖြင့်လေ့လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ Cd အတွက်တစ်ဦးချင်းသျော D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကွဲပြားခြားနားမဟုတ်ခဲ့အကျူး vs. ကြီးစိုး (t အတွက် Post-လူမှုရေးအိမ်ယာ3 = 2.18, P ကို ​​= 0.12) နှင့်လက်အောက်ခံ (t3 = 0.85, P ကို ​​= 0.46) မျောက် (စားပွဲတင် 2) ။ တစ်ဦးချင်းစီအိမ်ယာအတွင်း Cd နှင့် Pt အတွက်အသက်နှင့် D2 / D3 DVR များအကြားသိသိသာသာဆက်စပ်မျှမရှိ။
လွှမ်းမိုးအမျိုးသမီးမျောက်တွေကို dopamine D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိမှုတိုးလာ၏ဆောင်ရွက်ချက်များ။ Normal, Co-မှတ်ပုံတင်ပေပုံရိပ်တွေ (ml နှုန်းရာခိုင်နှုန်းကိုထိုးသွင်းထိုး) [၏18တစ်ဦးကြီးစိုးနှင့်လက်အောက်ခံ၏ midbrain အတွက် binding က F] FCP (caudate နျူကလိယနှင့် putamen) ...
အမျိုးသမီးမျောက်များအတွက် Dopamine D2 / D3 receptor ရရှိနိုင်
PET Scan ဖတ်ပြီးစီးခဲ့ကြသည်ပြီးတာနဲ့မျောက်ဟာသူတို့ရဲ့မူလလူမှုရေးအုပ်စုများမှပြန်လာသောနှင့်လီဗာကိုနှိပ်အစားအစာအားဖြည့်ထားတဲ့ FR 30 အချိန်ဇယားအောက်တွင်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည့်အတွက်အော်ပရေတာအမူအကျင့်အစည်းအဝေးများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ လွှမ်းမိုးနှင့်လက်အောက်ခံမျောက်အကြားတုံ့ပြန်၏အခြေခံနှုန်းထားများမကွဲပြားမှု (t ရှိခဲ့သည်13 = 0.68, P ကို ​​= 0.51) ။ ဆားအစားအသောက်ဘို့အစားထိုးခဲ့ပါတယ်အခါ, ငွိမျးတုံ့ပြန်၏နှုန်းထားများမအုပျစုကွဲပြားမှုရှိကြ၏ (စားပွဲတင် 3) ။ မျောက်တစ်ခုချင်းစီတွင်ကိုကင်းပမာဏမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှအစားအစာကိုနောက်ဆက်တွဲအစားထိုးခဲ့ပြီးကိုကင်းအားဖြည့်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။ လွှမ်းမိုးသောမျောက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိပ္ပံနည်းကျအမျိုးသမီးမျောက်များသည်ကိုကင်းအားအားဖြည့်မှုကိုသိသိသာသာနိမ့်ကျသောပမာဏဖြင့်ရရှိခဲ့သည်။သဖန်းသီး။ 4) ။ ကိုကင်းဝယ်ယူသည့် 11 မျောက်များ၏ 15 အတွက် follicular အဆင့်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဆိုပါ luteal အဆင့်ဝယ်ယူသောလေးမျောက်၏, တဦးတည်း # 1-အဆင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်နှစ်ခု # 2-အဆင့်ခဲ့ကြသည်နှင့်တစ် # 4-အဆင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ အဘယ်သူမျှမရာသီစက်ဝန်းကွဲပြားမှုရှိကြ၏သောကြောင့်, တစ်ဦးချင်းစီအဆင့်တစ်ခုချင်းစီကိုထိုးဘို့ဒေတာပျမ်းမျှခဲ့ကြသည် (သဖန်းသီး။ 5) ။ ပြီးပြည့်စုံသောကိုကင်းထိုး-တုံ့ပြန်မှုခါးဆစ်၏စာမေးပွဲ, လွှမ်းမိုးနှင့်လက်အောက်နှစ်ဦးစလုံးမျောက်အဘို့, တုန့်ပြန်မှုနှုန်းကြောင်းပြသ (F ကို5,84 = ၄.၂၂; : P <4.22) နှင့်ကိုကင်းစားသုံးမှု (F4,69 = 53.18; P <0.001) ကိုကင်းထိုး၏ function ကိုအဖြစ်သိသိသာသာကွဲပြား (သဖန်းသီး။ 5) ။ post-hoc စမ်းသပ်မှု (သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့တုန့်ပြန်မှုနှုန်းထင်ရှားသင်္ဘောသဖန်း။ 5A) 0.003 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး (t များအတွက်ရရှိနိုင်အခါလက်အောက်ခံတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကြီးစိုးမျောက်တွေကို1 = 2.89, P <0.05) ။ ကိုကင်းမှီဝဲမှုသည်မျောက်များအားလုံးတွင်ဆေးထိုးမှု၏လက္ခဏာအဖြစ်အထောက်အပံ့များပြားလာခြင်းနှင့်ကြီးစိုး။ လက်အောက်ငယ်သောမျောက်များတွင်ကွဲပြားမှုမရှိပါ။သင်္ဘောသဖန်း။ 5B).
လွှမ်းမိုးအမျိုးသမီးမျောက်လက်အောက်မျောက်ထက်နိမ့်ဆေးများမှာကိုကင်းအားဖြည့်ဆည်းပူး။ လွှမ်းမိုး (ပွင့်လင်းသင်္ကေတ) ၏ရာခိုင်နှုန်းနှင့်လက်အောက်ခံ (ပိတ်ထားတဲ့သင်္ကေတ) အမျိုးမျိုးသောဆေးများမှာကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးဆည်းပူးဖို့သတ်မှတ်ချက်ရောက်ရှိကြောင်းမျောက် ...
ကိုကင်းများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုလက်အောက်ခံတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကြီးစိုးအမျိုးသမီးမျောက်တွေကို သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ကြသည်။ A. ကိုကင်းများ၏ဆားသို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောဆေးများလွှမ်းမိုးဘို့ session တစ်ခုနှုန်းမရရှိနိုင်သောအခါ #1 အဆင့် ((တုံ့ပြန်မှု / စက္ကန့်) တုံ့ပြန်၏ (± SEM) နှုန်းကိုဆိုလို ...
လူမှုရေးအရသျောအမျိုးသမီးမျောက်တွေကို baseline တုံ့ပြန်မှုနှုန်းထားများ။
ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက် DA စနစ်, အထူးသ DAT နှင့်ကိုကင်းအားဖြည့်ဖို့အားနည်းချက်အပေါ် D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအတွင်းလူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပွောငျးလဲ၏အစွမ်းထက်အခန်းကဏ္ဍသရုပ်ပြအမျိုးသမီးမျောက်မှအထီးဘာသာရပ်များ (လူသားများ, မျောက်နှင့်ကြွက်) တွင်အစောပိုင်းအလုပ်တိုးချဲ့။ ယခင်သုတေသနကိုကင်းအားဖြည့်များ၏အနိမ့်အစီအမံများတွင်ဖြစ်ပေါ်ရသော DA D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု, (ထဲမှာကြီးစိုးပြပွဲသိသိသာသာတိုးဖြစ်လာကြောင်းကိုအထီးမျောက်ပြတော်မူပြီ9) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏အဓိကတွေ့ရှိချက်ကြီးစိုးအမျိုးသမီးမျောက်လူမှုရေးရာထူးဖွဲ့စည်းရေးအောက်ပါ D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးပြသခဲ့သည်ဒါပေမဲ့သူတို့ကင်းအားဖြည့်ဖို့ပိုပြီးအားနည်းချက်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားအတွင်း-ဘာသာရပ်တွေ့ရှိချက်လူမှုရေးအရသျောအမျိုးသမီးမျောက်တွေကိုသွေးကြောသွင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုဖော်ပြရန်နှင့် D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအကြားဆက်ဆံရေးအတွက်သိသာထင်ရှားသောလိင်ကွဲပြားမှုကိုသိရှိနိုင်ဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ကြသည်။
DA လှုပ်ရှားမှု၏သွယ်ဝိုက်အစီအမံကြီးစိုးမျောက်လက်အောက်မျောက်နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးအနိမ့်ပျမ်းမျှအား HVA အာရုံစူးစိုက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းထိုကဲ့သို့, CSF HVA ပြင်းအားနှင့်လူမှုရေးရာထူးအကြားသိသိသာသာဆက်ဆံရေးမျိုးဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်လူသားတွေအတွက်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းများမှာ (27) CSF HVA ၏အနိမ့်ပြင်းအားဖေါ်ပြခြင်းကြီးစိုးအမျိုးသမီးအတွက် သာ. ကြီးမြတ်ကျူးကျော်သူနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်။ CSF HVA ကိုကင်းအားဖြည့်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှုအဘို့အကောင့်ဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ရရန်ကျန်ရှိနေဆဲ; ဤအတိုင်းတာမှုများယခင်က (တစ်ဦးချင်းသို့မဟုတ်လူမှုရေးအရသျောအထီးမျောက်တွေကိုရယူကြသည်မဟုတ်9) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုလည်း (အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောအလုပ်တိုးချဲ့28) DAT ရရှိနိုင်မှု, နောက်ဆုံးလူမှုရေးရာထူး၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ကိုမစဉ်သိသိသာသာလက်အောက်ခံဖြစ်လာခဲ့သည်ကြောင်းအမျိုးသမီးမျောက်တွေကိုလျော့နည်းသွားကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံ presynaptic DA အစီအမံများပါဝင်သည်ရန်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်လူမှုရေးအရလက်အောက်ခံဖြစ်လာတစ်ဦးချင်းသျောကျန်ရှိသောဆင်တူမဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အထီးမျောက်တွေကိုလေ့လာတွေ့ရှိသက်ရောက်မှုနှင့်အတူတသမတ်တည်း, D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုသိသိသာသာလွှမ်းမိုးဖြစ်လာခဲ့သည်ကြောင့်အမျိုးသမီးများတွင်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့မူရင်းတစ်ဦးချင်းစီ-အိုးအိမ်ခွအေနအေမှအများဆုံးကြီးစိုး (ရာထူး #1) ပြန်လာနှင့်အများဆုံးလက်အောက်ခံ (ရာထူး #4) မျောက် D2 / D3 အဲဒီ receptor အစီအမံများနှင့်ညီမျှမှုကြောင့်ဤတိုး, လူမှုအဆင့်ဆင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ခံခဲ့ရသည်။ DA neurotransmission ၏သုံးအစီအမံများအကြားဆက်ဆံရေးစနစ်တကျပုံပေါ်ပါတယ်။ လက်အောက်ခံမျောက်ကြီးစိုးအမျိုးသမီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မား extracellular DA နှင့်ကိုက်ညီ HVA မြင့်မား CSF ပြင်းအား, ရှိသည် ဖြစ်. , လက်အောက်ငယ်သားအတွက်အနိမ့် DAT ရရှိမှုလည်းအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီသည်။ လက်အောက်ခံအထီးမျောက်များအတွက်တွေးဆအဖြစ်လက်အောက်ခံမျောက်တွေကိုအောက်ပိုင်း D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကိုလည်း (DA မြင့်မား Synaptic ပြင်းအား၏ညွှန်ပြစေခြင်းငှါ9, 16) ။ စိတ်ကြွဆေး၏ D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုအလားအလာများအကြားတစ်ဦးပြောင်းပြန်ဆက်ဆံရေးမျိုး (အကြံပြုခြင်းယောက်ျားအတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာစာပေမှမတူဘဲ8-11), ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကိုအမျိုးသမီးမျောက်တွေကို D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်ကိုကင်းအားဖြည့်အကြားတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရေးမျိုးအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒါကပိုမိုမြင့်မား D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်အတူအမျိုးသမီးအောက်ပိုင်း D2 / D3 အဲဒီ receptor အစီအမံတွေနဲ့မျောက်ထက်ကိုကင်းအားဖြည့်ဖို့ပိုပြီးအားနည်းချက်ခဲ့ကြသည်ဖြစ်ပါသည်။
အပြုအမူနှင့်ဦးနှောက်ပုံရိပ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌တိုက်ရိုက်လိင်နှိုင်းယှဉ်ထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါကြောင်းလေ့လာမှုများအကြားအချို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကွဲပြားမှုရှိခဲ့သည်။ တစ်ဦးစစ်ကူအဖြစ်လည်ပတ်အလုပ်လုပ်နေတယ်ကြောင့်နိမ့်ဆုံးကိုကင်းထိုးဆုံးဖြတ်ရန် - ပစ္စုပ္ပန် Self-အုပ်ချုပ်ရေးလေ့လာမှုများအားနည်းချက်ပုံစံဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်အောက်ပိုင်းကိုကင်းဆေးများမှာတုန့်ပြန်မှုနှုန်းသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုတွေ့နေချိန်မှာကျနော်တို့ကိုကင်းစားသုံးမှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုစောငျ့ရှောကျခဲ့ပါဘူး။ ဆနျ့ကငျြ, အထီးလက်အောက်ခံမျောက် (လွှမ်းမိုးအထီးမျောက်နှိုင်းယှဉ်ပိုမိုမြင့်မားကိုကင်းစားသုံးမှုခဲ့9) ။ ယောက်ျားအဘို့, ဆေးများ (တွေ့မြင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအကြားကင်းစားသုံးမှုအတွက်ကွဲပြားမှုများအတွက်အကောင့်ရသော, အစားပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုထဲမှာရှိသကဲ့သို့အမိန့်ကျကွှထက်, ကျပန်းနိုင်ရန်အတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည် 29) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုရှင်းလင်းစွာကြီးစိုးအမျိုးသမီးလက်အောက်ငယ်သားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကင်းအားဖြည့်ဖို့ပိုပြီးအားနည်းချက်ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဒါဟာ (ပင်လွှမ်းမိုးနှင့်လက်အောက်ခံမျောက်အကြားအခြေခံကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ရသောအခြေအနေများအောက်တွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးမျောက်ရဲ့လူမှုရေးအဆင့်ပေါ် မူတည်. အကြီးအကျယ်ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများထုတ်လုပ်နိုင်သည်ကိုသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်30) ။ က D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုတို့နဲ့ဆက်စပ်အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားပေကင်မရာများယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ယောက်ျားမှာအချိန်မရွေး Spatial resolution ကိုသာ9မီလီမီတာနှင့် Basal ganglia အတွက်ကြီးစိုးအထီးများအတွက် DVR 3.04 ဖြစ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးအတွက်ရရှိသောတန်ဖိုးများ (အများကြီးပိုမိုမြင့်မားခဲ့ကြစားပွဲတင် 1) ။ ဒါကြောင့်တစ်ချိန်တည်းမှာနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းစမ်းသပ်ဖို့စံပြဖြစ်ရပြီမယ်လို့နေစဉ်, D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်လူမှုရေးရာထူးအကြားဆက်ဆံရေးယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွက်ဆင်တူသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုမှ D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်အားနည်းချက်များအကြားအဆိုပါပြောင်းပြန်ဆက်ဆံရေးမျိုး (DA dysregulation နှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့တွေးဆထားသည်8,31) ။ HVA ပြင်းအားကို (striatum အတွက် DA ၏အစီအမံ Parallel ပြခဲ့ကြ32); အရှင်, လက်အောက်ငယ်သားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကြီးစိုးပိုအားနည်းချက်မျောက်, အတွက်အနိမ့် HVA ပြင်းအားတစ် hypodopaminergic system အတွက်ထောက်ခံမှုပေးထားပါသည်။ သို့သျောလညျးအမြိုးသမီးအတွက် D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်အားနည်းချက်အကြားတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရေးဟာယောက်ျားအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသောဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီးတစ်ဦးတည်း D2 / D3 အဲဒီ receptor ပြောင်းလဲမှုများကိုကင်းအားဖြည့်ဖို့ sensitivity ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လုံလောက်သောမကျမည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အထီးမျောက်တွေကိုအစောပိုင်းကအလုပ်နာတာရှည်ကင်းထိတွေ့ D2 / D3 အဲဒီ receptor အစီအမံ (လျော့နည်းသွားကြောင်းပြသထားပါတယ်10,33,34) နှင့်မျောက်တွေကို DAT အထိတိုးမြှင့် (35) နှင့်လူသားမြားသညျ (36) ။ ထို့ကြောင့်ယောက်ျားမြင့်မား D2 / D3 နှင့်အနိမ့် DAT ရရှိနိုင်မှုလျော့နည်းအားနည်းချက်နှင့်ကုသမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသင့်ပါတယ်အတွက် D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်ကျဆင်းခြင်း DAT ရရှိနိုင်မှုမြှင့်ကြောင်းမဟာဗျူဟာများအကျိုးရှိဖြစ်သင့်သည်။ အမျိုးသမီးအတွက်အပိုဆောင်းသုတေသနပိုကောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုမှအားနည်းချက်ဖြန်ဖြေသည့်ယန္တရားများအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်ပါသည်သော်လည်းသို့သော်ဤနည်းဗျူဟာ (အမျိုးသမီးအတွက်အကျိုးရှိသောမကျမည်အကြောင်း37).
အဝလွန်ခြင်းအပါအဝင် D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်အတော်ကြာစွဲလမ်းအပြုအမူတွေအကြားတစ်ဦးပြောင်းပြန်ဆက်ဆံရေးအဘို့သက်သေအထောက်အထား (ရှိပါသည်38) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာတော့လက်အောက်ခံမျောက်လက်အောက်အမျိုးသမီးမျောက်များထက်ပိုနိမ့်အဆီနှင့်မြင့်မားသောအဆီအစားအစာကိုစားသုံးခြင်းနှင့်လွှမ်းမိုးအမျိုးသမီးမျောက် (နှိုင်းယှဉ်ပိုပြီးအလေးချိန်ရရှိကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းနဲ့အခြားသုတေသနနှင့်ကိုက်ညီသောအနိမ့် D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု, ရှိခဲ့ပါတယ်39,40) ။ သို့သော်ကြီးစိုးအမျိုးသမီးမျောက်လက်အောက်ငယ်သားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကင်းအားဖြည့်ဖို့ပိုအထိခိုက်မခံခဲ့ကြသည်ဟူသောအချက်ကိုအားလုံးစွဲလမ်းအပြုအမူတွေ (ကဆင်တူ etiology ရှိသည်သောအယူအဆနှင့်အတူအလေးသာမှာ41,42) ။ တဦးတည်းဖြစ်နိုင်ခြေကို (berry သီး-အရသာလုံးလေးများကြီးစိုးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လက်အောက်ခံမျောက်အတွက်အားကောင်းစစ်ကူခဲ့ကြသည်နှင့်ဤ berry သီး-အနံ့လုံးလေးများများအတွက်ကင်းအစားအဆိုပါလက်အောက်ခံမျောက်အတွက်အတော်လေးအားနည်းစစ်ကူဖြစ်ခြင်းကိုကင်းမှုအကြောင်း, တစ်ဦးဖြစ်စဉ်ကိုဆုလာဘ်တန်ဖိုးချေါသောကွောငျ့ဖွစျသညျ43,44) ။ သို့သျောလညျး, အစားအစာ-ထိန်းသိမ်းထားတုံ့ပြန်မရာထူး-related ကွဲပြားမှုရှိကြ၏။ တစ်ဦးကစက္ကန့်ဖြစ်နိုင်ချေကတော့လက်အောက်ခံမျောက်အားဖြင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှု၏အနိမ့်မှုနှုန်း "အားကောင်း" ကိုကင်းအားဖြည့်ကိုယ်စားပြုသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ရိုးရှင်းတဲ့ပုံသေ-အချိုးအချိန်ဇယားများအသုံးပြုမှု (တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအားဖြည့်များ၏နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်ခွင့်ပြုမထားဘူး45) ။ သို့သော်စမ်းသပ်ဒီဇိုင်းကိုကင်းအားဖြည့်များ၏ဝယ်ယူတစ်ခုခြောအကဲဖြတ်ဘို့ခွင့်ပြုပြုကြီးစိုးအမျိုးသမီးမျောက်ကိုကင်းအားဖြည့်ဖို့ပိုပြီးအားနည်းချက်ဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြ။ အစားအစာ-ကင်းရွေးချယ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနာဂတ်လေ့လာမှုများ (ကိုကင်းများ၏အားဖြည့်အစွမ်းသတ္တိကိုလူမှုရေးအရသျောအမျိုးသမီးအတွက်ကွဲပြားခြားနားခဲ့တာရှိမရှိ၏ပြဿနာဖြေရှင်းမယ်လို့26).
ငါတို့သည်ငါတို့၏လူမှုရေးအရသျောမျောက်တွေကိုလိင်ကွဲပြားမှုမှတ်ချက်ချနေချိန်မှာကျနော်တို့ကိုကင်းအားဖြည့်အပေါ်ရာသီစက်ဝန်းအဆင့်၏သိသာထင်ရှားသောဆိုးကျိုးများစောငျ့ရှောကျခဲ့ပါဘူး။ ဤသည်ကို (ရာသီစက်ဝန်းအဆင့်ကိုဖြတ်ပြီး D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုများအတွက်အထောက်အထားစဉ်းစားအံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည်23) ။ တဦးတည်းဖြစ်နိုင်ခြေ (ကြှနျုပျတို့အဓိကအားအစောပိုင်းအားနည်းချက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်ရာသီစက်ဝန်းကွဲပြားခြားနားမှုကိုကင်းဖို့ပိုရှည်လက်လှမ်း၏အခြေအနေများအောက်တွင်မှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြကြောင်းခဲ့ကြသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ46) ။ (ကြွက်များတွင်ကင်းအားဖြည့်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှုများ၏တွေ့ရှိချက်များရှိခဲ့သည်46,47), မျောက် (46,49) နှင့်လူတွေ (50) နှင့်လူ့ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်လတ်တလောလေ့လာမှု (အမျိုးသမီးတွေ vs. ယောက်ျားအတွက် DA D2 / D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုကိုပြသထားပါတယ်51) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု (ဦးနှောက် DA အဲဒီ receptor function ကိုပေါ်နှင့်ကင်းအလွဲသုံးစားမှုမှအားနည်းချက်ပေါ်ဤအကြောင်း variable တွေကို၏အကျိုးဆက်များအပေါ်လူမှုရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေ၏အရေးပါမှုကိုအတည်ပြု52,53) ။ ကိုကင်းစွဲအပေါ်သုတေသနအများစုအထီးထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား, လိင် neurobiological အကျိုးဆက်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုအဖြစ် etiology နှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်ကွဲပြားခြားနားသောကုသမှုမဟာဗျူဟာများအကြံပြုယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမြိုးသမီးမြားအတွက်ထိရောက်သောဖြစ်နှင့်ယောက်ျားပေါင်းနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာနေ၏အရေးပါမှုကိုအားဖြည့်မယ်လို့ သီးခြားကုသမှုရွေးချယ်စရာ၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ။
ကျနော်တို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နည်းပညာအကူအညီအဘို့ဤစာမူကိုနှင့်ဂျနီဖာ Sandridge, Michelle Icenhower, Susan Martelle, Whitney Wilson က, Tonya Calhoun, Dewayne Cairn ကင်မ်က Black, Holly စမစ်နှင့်လီဝူတစ်ခုအစောပိုင်းကဗားရှင်းအပေါ်မှတ်ချက်တွေအဘို့အ Cora Lee က Wetherington ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ အဆိုပါ CSF နမူနာနယူးယောက်ပြည်နယ်စိတ်ရောဂါ Institute ကမှာဒေါက်တာဂျွန်မန်းတို့ကသုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာသုတေသနမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု Grant က DA 017763 အပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုကထောက်ခံခဲ့သည်။
MAN, SHN, PWC နှင့် NVR အဆိုပါစမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ NVR, RWG နှင့် BLB သွေးကြောသွင်း catheterization အပါအဝင်အပြုအမူလေ့လာမှုများ, ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ HDG စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းများအတွက်တာဝန်ရှိခဲ့လူမှုအိမ်ရာထိန်းသိမ်းရေး, PKG, HMLD, DM နှင့်စင်ကာပူဒေါ်လာနှင့်အတူကူညီအဆိုပါ PET ဒေတာ, JRK radiotracers နှင့် BAR နှစ်ဦးစလုံး၏စုပေါင်းပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ် SHN, PWC, RWG, BLB နှင့် JRK ထံမှအကူအညီဖြင့် MAN ကရေးသားခဲ့သည်
1 ။ WHO က။ psychoactive ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်မှီခိုများ၏ neuroscience ။ ဂျီနီဗာ: ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့; 2004 ။
2 ။ SAMHSA ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ်အမျိုးသားရေးစစ်တမ်းအတွက်သော့ချက်အစီအမံများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲမှု, ကျန်းမာရေးနှင့်လူ့န်ဆောင်မှုများ၏အမေရိကန် Dept. ; Rockville, MD: 2010 ။
3 ။ O 'Brien က CP ။ relapse ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အဆေးဝါးများ Anticraving: psychoactive ဆေးဝါးများတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှအသစ်သောအတန်းအစား။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162: 1423-1431 ။ [PubMed]
4 ။ Elkashef တစ်ဦးက, Biswas J ကို, Acri JB, Vocci အက်ဖ်ဇီဝနည်းပညာနှင့်စွဲလမ်းမမှန်များ၏ကုသမှု: အသစ်သောအခွင့်အလမ်းများ။ BioDrugs ။ 2007; 21: 259-267 ။ [PubMed]
5 ။ O 'Brien က MS, အန်သိုနီ JC ။ မှီခိုကင်းဖြစ်လာ၏အန္တရာယ်: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအဘို့အ epidemiological ခန့်မှန်းချက်, 2000-2001 ။ Neuropsychopharmacology ။ 2005; 30: 1006-1018 ။ [PubMed]
6 ။ Greenfield SF, Back ကို SE, Lawson K သည်, Brady KT ။ အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု။ စိတ်ရောဂါ Clin မြောက်မိပါတယ်။ 2010; 33: 339-55 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
7 ။ Zilberman M က, Tavares H ကို, El-Guebaly N. ကျားတူညီနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု: alcohol- နှင့်အခြားပစ္စည်းဥစ္စာ-related မမှန်များ၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်သင်တန်း။ J ကိုစွဲ dis ။ 2003; 22: 61-74 ။ [PubMed]
8 ။ et al Volkow ND, ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Gatley SJ, Logan J ကို, Ding YS ။ သွေးကြောသွင်း methylphenidate အားဖြင့် striatal dopamine ပို့ဆောင်ရေးပိတ်ဆို့မြင့်သော "၏ Self-အစီရင်ခံစာများသွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1999; 288: 14-20 ။ [PubMed]
9 ။ မော်ဂန်: D, Grant က ka, Gage, HD, Mach RH အ, Kaplan JR, Prioleau အို et al ။ dopamine D2 receptors နှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး: မျောက်အတွက်လူမှုကြီးစိုး။ နတ် neuroscience ။ 2002; 5: 169-174 ။ [PubMed]
10 ။ Nader, MA, မော်ဂန်: D, Gage, HD, Nader SH, Calhoun TL, Buchheimer N ကို, et al ။ မျောက်များအတွက်နာတာရှည်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း dopamine D2 receptors ၏ပေပုံရိပ်။ နတ် neuroscience ။ 2006; 9: 1050-1056 ။ [PubMed]
11 ။ Dalley JW, Fryer TD, Brichard L ကို, ရော်ဘင်ဆင် ESJ, Theobald DEH, Laane K သည်, et al ။ နျူကလိယ D2 /3receptors ရို Impulse နှင့်ကိုကင်းအားဖြည့်ကြိုတင်ခန့်မှန်း accumbens ။ သိပ္ပံ။ 2007; 315: 1267-1270 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
12 ။ Tidey JW, Miczek Ka ။ လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသိမ်းယူမှု: accumbens dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍ။ Psychopharmacology ။ 1997; 130: 203-212 ။ [PubMed]
13 ။ Bardo MT, Klebaur je, Valone JM, Deaton C. ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသန့်စင်အမျိုးသမီးနှင့်အထီးကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေး၏သွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေပါသည်။ Psychopharmacology ။ 2001; 155: 278-284 ။ [PubMed]
14 ။ Deroche-Gamonet V ကို, ဘီးလင်း: D, Piazza PV ။ ကြွက်များတွင်စွဲတူသောအပြုအမူများအတွက်အထောက်အထား။ သိပ္ပံ။ 2004; 305: 1014-1017 ။ [PubMed]
15 ။ Kabbaj M က, က Norton CS, Kollack-Walker က S နဲ့, Watson ဟာ SJ, ရော်ဘင်ဆင် TE, Akil အိပ်ချ်လူမှုရှုံးနိမ့်ကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏ဝယ်ယူပွောငျးလဲ: ကင်းအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု၏အခန်းကဏ္ဍအပြုအမူတာ။ Psychopharmacology ။ 2001; 158: 382-387 ။ [PubMed]
16 ။ Nader, MA, Czoty PW, သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင် RW, Riddick NV ။ dopamine D2 receptors ၏ပေပုံရိပ်လေ့လာမှုများ: စွဲ၏ nonhuman မျောက်မော်ဒယ်များအတွက်ပတ်ဝန်းကျင် interaction က×သက်ရှိ Characterizing ။ ခုနှစ်တွင်: Robbins T က, Everritt B, Nutt DJ သမား, အယ်ဒီတာများ။ မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏ Neurobiology: နယူး Vista ။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; အောက်စဖို့, ဗြိတိန်: 2010 ။ စစ။ 187-202 ။
17 ။ Kaplan JR, Manuck SB, သူမရဲ့ပထမဆုံးအယ်လ်ဘမ်တီဘီ, Lusso FM ရေ, Taub DM ။ လူမှုရေးအခြေအနေ, ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် cynomolgus မျောက်တွေကိုသွေးကြော။ Arteriosclerosis ။ 1982; 2: 359-368 ။ [PubMed]
18 ။ Riddick NV, Czoty PW, Gage, HD, Kaplan JR, Nader SH, Icenhower M က, et al ။ အမျိုးသမီး cynomolgus မျောက်တွေကိုလူမှုရေးအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းခြင်းလွှမ်းမိုးမူအကျင့်များနှင့် neurobiological ဝိသေသလက္ခဏာများ။ neuroscience ။ 2009; 158: 1257-1265 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
19 ။ ပိုး JB ။ လူမှုရေးအုပ်စုများအတွက် status ကိုပြိုင်ပွဲ၏ယုတ္တိဗေဒ: ကျူးကျော်ခြင်းနှင့်ခြိမ်းခြောက်၏မရှိသောပြုမူသောအမှုကျပန်းပြုမူကျင့်သုံးပါ။ Evol Anthropol ။ 2002; 11: 221-225 ။
20 ။ Kaplan JR, ချန် H ကို, Appt SE, Lees CJ, Frank AA ကို, Berga SL, et al ။ သားအိမ် function ကို၏ချို့ယွင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ကျန်းမာရေး-related မူမမှန် high-isoflavone ပဲပုပ်အစားအသောက်များတွင်အားဖြင့်လျော့ပါး premenopausal မျောက်နှင့်မအတွက်အနိမ့်လူမှုရေးအဆင့်အတန်းမှတွေကပေါ်ကနေဖြစ်ကြသည်။ လူ့ Reprod ။ 2010; 25: 2083-2094 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
21 ။ Becker က JB ။ striatum နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopaminergic function ကိုအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1999; 64: 803-812 ။ [PubMed]
22 ။ Watson ဟာ CS, Alyea RA, Cunningham Ka, Jeng YJ ။ မျိုးစုံအတန်းနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးရောဂါယန္တရားများအတွက်၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍများအီစထိုဂျင်။ int J ကိုအမျိုးသမီးများကနျြးမာရေး။ 2010; 2: 153-166 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
23 ။ Czoty PW, Riddick NV, Gage, HD, Sandridge M က, Nader SH, Garg က S, et al ။ အမျိုးသမီး cynomolgus မျောက်တွေကို dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအပေါ်ရာသီစက်ဝန်းအဆင့်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2009; 34: 548-554 ။ [PubMed]
24 ။ Mach RH အ, Nader, MA, Ehrenkaufer RL, Gage, HD, Childers SR, Hodges LM, et al ။ အဆိုပါ dopamine ပို့ဆောင်ရေးပေပုံရိပ်လေ့လာမှုများအဘို့အဖလိုရင်း-18-တံဆိပ်ကပ် tropane analog ။ synapses ။ 2000; 37: 109-117 ။ [PubMed]
25 ။ Mach RH အ, Luedtke RR, Unsworth CD ကို, Boundy VA သို့, Nowak PA ဆိုပြီး, Scripko JG, et al ။ 18 အဆိုပါ dopamine D ကိုလေ့လာနေဘို့က F-တံဆိပ်ကပ် radioligands2 positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့်အတူအဲဒီ receptor ။ J ကို Med Chem ။ 1993; 36: 3707-3720 ။ [PubMed]
26 ။ Czoty PW, McCabe ကို C, Nader, MA ။ ရွေးချယ်စရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသုံးပြီးလူမှုရေးအရသျောမျောက်တွေကိုကိုကင်းများ၏ဆွေမျိုးအားဖြည့်အစွမ်းသတ္တိ၏အကဲဖြတ်။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2005; 312: 96-102 ။ [PubMed]
27 ။ Coccaro EF, Lee က R. Cerebrospinal အရည် 5-hydroxyindolacetic အက်ဆစ်နှင့် homovanillic အက်ဆစ်: လူ့ဘာသာရပ်များအတွက်ထကြွလွယ်သောကျူးကျော်အတူအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေး။ J ကိုဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Transm ။ 2010; 117: 241-248 ။ [PubMed]
28 ။ et al Ka, Shively, CA, Nader, MA, Ehrenkaufer RL, လိုင်း SW, Morton TE, ပေးသနား။ striatal dopamine: D အပေါ်လူမှုရေးအဆင့်အတန်းများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု2 positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့်အတူအကဲဖြတ် cynomolgus မျောက်တွေကိုအဲဒီ receptor စည်းနှောင်ဝိသေသလက္ခဏာများ။ synapses ။ 1998; 29: 80-83 ။ [PubMed]
29 ။ Czoty PW, မော်ဂန်: D, Shannon EA ၏, Gage, HD, Nader, MA ။ လူမှုရေးအရသျော cynomolgus မျောက်တွေကို dopamine D1 အဲဒီ receptor function ကို၏စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ Psychopharmacology ။ 2004; 174: 381-388 ။ [PubMed]
30 ။ Czoty PW, Nader, MA ။ လူမှုရေးအရသျောအထီး cynomolgus မျောက်တွေကိုကင်းရွေးချယ်မှုအပေါ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုများ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်။ Psychopharmacology ။ စာနယ်ဇင်းများတွင် 2012 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
31 ။ Martinez: D, Orlowska: D, Narendran R ကို, Slifstein M က, လျူက F, Kumar က D:, et al ။ ကိုကင်းမှီခိုနှင့်အတူလူနာအတွက် endogenous dopamine ၏အနိမ့်အဆင့်ကို: စူးရှ dopamine လျော့ကျအောက်ပါ D2 / D3 receptors ၏ပေပုံရိပ်ကနေတွေ့ရှိချက်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009; 166: 1170-1177 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
32 ။ စန်တီယာဂို RM, Barbieiro J ကို, Lima MMS ကို, Dombrowski PA ဆိုပြီး, Andreatini R ကို, အရေးပါ MABF ။ intranigral MPTP, 6-OHDA အားဖြင့်သွေးဆောင်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူကိုပြောင်းလဲ, ပါကင်ဆန်ရောဂါ LPS နှင့် rotenone မော်ဒယ်များအများစု serotonin နဲ့ dopamine နဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ prog Neuro-Psychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010; 34: 1104-1114 ။ [PubMed]
33 ။ Moore က RJ, Vinsant SL, Nader, MA, Porrino LJ, Friedman DP ။ dopamine D ကိုအပေါ်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှု2 မျောက်တွေကိုအတွက် receptors ။ synapses ။ 1998; 30: 88-96 ။ [PubMed]
34 ။ Nader, MA, Daunais JB, Moore က T က, Nader SH, Moore က RJ, Smith က HR, et al ။ မျောက်တွေကိုအတွက် striatal dopamine စနစ်များအပေါ်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသက်ရောက်မှု: ကနဦးနှင့်နာတာရှည်ထိတွေ့မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2002; 27: 35-46 ။ [PubMed]
35 ။ Letchworth SR, Nader, MA, Smith က HR, Vinsant SL, Moore က RJ, Friedman DP, Porrino LJ ။ ကိုကင်းမျောက်တွေကိုအတွက် Self-အုပ်ချုပ်ရေး: dopamine Transporter စည်းနှောင် site ကိုသိပ်သည်းဆအတွက်အပြောင်းအလဲများတိုးတက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 2799-2807 ။ [PubMed]
36 ။ Staley JK, Hearn WL, Ruttenber AJ, Wetli CV ကို, mash DC က။ အဆိုပါ dopamine Transporter အပေါ်အမြင့်ဆှဖှေဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုက်ဘ်ဆိုက်များဆိုးဝါးကင်းအလွန်အကျွံသုံးစွဲသားကောင်များအတွက်ခြီးမွှောကျနေကြသည်။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1994; 271: 1678-1685 ။ [PubMed]
37 ။ Andersen က ML, Sawyer ek, Howell ll ။ ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုများတွင်လိင်ကွဲပြားမှုကိုနားလည်ရန် neuroimaging ပံ့ပိုးမှုများကိုသာ။ Exp Clin Psychopharmacol ။ 2011 [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏] [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
38 ။ ဝမ် GJ, Volkow ND, Logan J ကို, Pappas ရော်ဘာ, Wong ကမှန် CT, Zhu W က, et al ။ ဦးနှောက် dopamine နှင့်အဝလွန်ခြင်း။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet ။ 2001; 357: 354-357 ။ [PubMed]
39 ။ Wilson က ME, Fisher က J ကို, Fischer တစ်ဦးက, Lee က V ကို, Harris က RB, Bart တီဂျေ။ ကယ်လိုရီစားသုံးမှုအပေါ်လူမှုရေးအဆင့်အတန်းသက်ရောက်မှု: လူမှုရေးအရသျောမျောက်တွေကိုအစားအစာစားသုံးမှု Quantifying ။ Physiol ပြုမူနေ။ 2008; 94: 586-594 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
40 ။ Arce M က, Michopoulos V ကို, Shepard KN, Ha ZC, Wilson က ME ။ အစားအသောက်ရွေးချယ်မှု, cortisol reactivity ကိုနှင့်လူမှုရေးအရသျောမျောက်တွေကိုအတွက်စိတ်ခံစားမှုနို့တိုက်ကျွေး။ Physiol ပြုမူနေ။ 2010; 101: 446-455 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
41 ။ စတိန်း RZ, Volkow ND ။ မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်၎င်း၏နောက်ခံ neurobiological အခြေခံ: အတိုကျရိုကျ cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအဘို့သက်သေအထောက်အထား neuroimaging ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 159: 1642-1652 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
42 ။ Koob gf, Le Moal အမ်စွဲခြင်းနှင့်ဦးနှောက် antireward စနစ်။ Annu ဗြာ Psychol ။ 2008; 59: 29-53 ။ [PubMed]
43 ။ Grigson ဆာ။ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ဆုလာဘ်နှိုင်းယှဉ်၏မူးယစ်ဆေးဝါး: တစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ အစာစားချင်စိတ်။ 2000; 35: 89-91 ။ [PubMed]
44 ။ Freet CS, Steffen ကို C, Nestler EJ, Grigson ဆာ။ DeltaFosB ၏ Overexpression ကြွက်တွေမှာ saccharin စားသုံးမှု၏ attenuation ကင်း-သွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2009; 123: 397-407 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
45 ။ Johanson အီး, Schuster CR ။ မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ။ ခုနှစ်တွင်: Mello NK, အယ်ဒီတာ။ ပစ္စည်းအလွဲသုံးမှုတိုးတက်လာ: အပြုအမူများနှင့်ဇီဝသုတေသန။ II ကို။ Jai စာနယ်ဇင်း; ဂရင်းနစ်, CN: 1981 ။ စစ။ 219-297 ။
46 ။ Mello NK, Knudson ထားတဲ့ IM, Mendelson JH ။ လိင်နှင့် cynomolgus မျောက်တွေကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးတက်သောအချိုး mreasures အပေါ်ရာသီစက်ဝန်းဆိုးကျိုးများ။ Neuropsychopharmacology ။ 2007; 32: 1956-1966 ။ [PubMed]
47 ။ ရောဘတ် DCS, Bennett က SAL, Vickers GJ ။ အဆိုပါ estrous သံသရာကြွက်တစ်တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအပေါ်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသက်ရောက်သည်။ Psychopharmacology ။ 1989; 98: 408-411 ။ [PubMed]
48 ။ Lynch WJ ။ မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှအားနည်းချက်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ Exp Clin Psychopharmacol ။ 2006; 14: 34-41 ။ [PubMed]
49 ။ Broadbear JH, တောင်ပံကစားသမား, G, cicero တီဂျေ, ဝုဒ် JH ။ တုံ့ပြန်မှုကဆက်ပြောပါတယ်နှင့်မျောက်တွေကိုအတွက် hypothalamic-pituitary-adrenal လှုပ်ရှားမှုအပေါ် noncontingent ကိုကင်းဆေးထိုး၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1999; 290: 393-402 ။ [PubMed]
50 ။ Mello NK, Mendelson JH ။ ကိုကင်း, ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ: လက်တွေ့နှင့် preclinical လေ့လာမှုများ။ ခုနှစ်တွင်: Pfaff DW, အာနိုးက AP, Etgen လေး, Fahrbach SE, Rubin က RT ကို, အယ်ဒီတာများ။ ဟော်မုန်း, ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူ။2။ ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; စန်း Deigo,, CA: 2009 ။ စစ။ 3081-3139 ။
51 ။ ဘရောင်း AK, Mandelkern MA, Farahi J ကို, Robertson ကနေ C, Ghahremani DG, Sumerel B, Moallem N ကို, လန်ဒန် ED ။ striatal dopamine: D အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု2/D3 ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် Non-ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု။ int J ကို Neuropsychopharmacol ။ စာနယ်ဇင်းများတွင် 2012 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
52 ။ Calvo N ကို, Cecchi M က, Kabba M က, Watson ဟာ SJ, အသစ်အဆန်းမြင့်မားခြင်းနှင့်အနိမ့် locomotor တုံ့ပြန်မှုနဲ့အတူကြွက်များတွင်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်၏ Akil အိပ်ချ် Differential ဆိုးကျိုးများ။ neuroscience ။ 2011; 183: 81-89 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
53 ။ Miczek Ka, Nikulina EM, Takahashi တစ်ဦးက, Covington သူ, III ကို, Yap JJ, Boyson CO, Shimamoto တစ်ဦးက, က de Almeida RMM ။ ကျူးကျော်ခြင်းနှင့်ရှုံးနိမ့်နေစဉ်အတွင်း aminergic နှင့် peptidergic ဆဲလ်အတွင်းရှိဗီဇစကားရပ်: အကြမ်းဖက်မှု, စိတ်ကျရောဂါနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုမှဆီလျော်။ ပြုမူနေမျိုးရိုးဗီဇ။ 2011; 41: 787-802 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]